Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football Nizeriana Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny legiona soccer nizeriana malaza amin'ny anarana; "Papilo". Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-mitranga hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Famakafakana ny tantaram-piainany eo anatrehan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavatra maro momba ny OFF sy ON-Pitch momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny tsirairay fa tsy dia marim-pototra ny momba ny Biographie Kanu izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Voalohandohan'ny fiainana
Nwankwo Kanu dia teraka tamin'ny andro 1st of August 1976 tany Owerri, Imo, Nizeria. Ny anarany, Nwankwo, dia midika 'Ankizy teraka tamin'ny andron'ny tsena Nkwo' amin'ny fiteny Igbo. Izy dia teraka tamin'ny Ramatoa Susan, ny reniny sy ny rainy, Iheme Kanu izay teraka tao Okija ao Ihiala LGA ao Anambra State, Nizeria.
Nihalehibe tany Owerri, Nizeria niaraka tamin'ireo rahalahiny i Kanu; (Christopher sy Ogbonna Kanu) ary ny bateria; Anderson Gabolalmo Kanu sy Henry Isaac. Nanomboka ny asany ao amin'ny Federasiona Nasionalin'ny Ligin'ny Federasiona Nizeriana, talohan'ny nifindrany tany Iwuanyanwu Nationale.
Mpilalao baolina kitra Super Eagles, Kanu Nwankwo dia mbola zatovo fony izy lasa olo-malaza rehefa nitondra ny fireneny handresena ny FIFA Under-17 World Cup miaraka amin'ny Golden Eaglets; Tao anatin'ny volana maromaro, niaina ilay nofy izy, niditra tao amin'ny AFC Ajax tao amin'ny 1993 noho ny € 207,047.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Olo-malaza Olaimpika
Kanu indray no nitarika ny Nizeriana ekipa izay nahazo ny volamena tamin'ny Olympika. Mbola ao amin'ny fahatsiarovan'ireo Nizeriana i Peharps, dia nahatratra tanjona roa tonta tamin'ny lalao semi-final ny kanu i Kanu mba handrodana ny toeran'ny 2-3 ho fandresena 4-3 amin'ny fotoana fanampiny.
Nantsoina koa i Kanu Afrikana mpilalao baolina kitra amin'ny taona ho an'ity taona ity dia misaotra ny fandraisany anjara amin'ny fandresena 1996 ho an'ny fireneny.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Relationship Life
Kanu dia sambatra am-panambadiana amin'i Amarachi. Tahaka an'i Nizeria Omotola Ekeinde, Amara Nwankwo dia nanambady ny zandriny (tamin'ny taona 18). Araka ny hevitr'ilay vehivavy malaza, dia niraiki-pitia tamin'ny mpilalao sarimihetsika efa taloha izy ka nahatonga ny taonany ho marobe ho azy. Kanu dia 10 taona efa antitra noho Amara.
Tanora Amarachi amin'ny Fitiavana
Ao anatin'ny teniny ..."Tsy natahotra aho. Nahatsapa aho fa izany no zavatra tsara indrindra mety ho nitranga tamiko. Tena tia aho; ka tsy nisy fotoana ho an'ny fihetseham-po ratsy toy ny tahotra.
Ianao, izaho tsy vonona ny handroso ho amin'ny fahazavana. Tsy fantatro akory hoe inona no nahatonga ahy ho tafiditra tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mpankafy baolina kitra aho ary tsy nahalala na inona na inona momba ny fisongadinan'ny Premiership ny nandao ny sisintanin'i Nizeria. Ankehitriny dia efa nandeha lavitra ary lasa mpankafy baolina kitra " Hoy i Amarachi.
Kanu sy Amarachukwu (Sary Wedding)
Taorian 'ny fanambadiany, dia tsy nisy fandaniam-potoana ny fiterahana. Ankehitriny izy ireo dia nahazo zanaka telo; roa lahy (Iyang Onyekachi Kanu), (Sean Chukwudi Kanu) ary ankizivavy (Pinky Amarachi Kanu).
Kanu Nwankwo's (Credit to BuzzNigeria)
Ity ambany ity ny sarin'i Kanu sy ny vady aman-janany mahafinaritra.
Ny sarin'ny fianakavian'i Kanu Nwankwo
Ny vadin'i Kanu, Amara dia nanome antoka fa vitany ny fianarany taorian'ny fanambadiany. Nanohy fianarana ambony tao amin'ny Architecture izy. Nahazo diplaoma koa izy talohan'ny nahaterahan'ny zanany vavy. Vao haingana, nahazo ny MBA izy.
Sean no zanaka lahimatoan'i Nizeriana taloha dia nanaraka ny dian'ny rainy ho mpilalao baolina. Ny Sean (ilay avo indrindra) indray dia nanome baolina efatra tao anaty lalao iray ho an'ny ekipany.
Ny Zanak'i Kanu Nwankwo - Ny lehibe sy ny tsara indrindra ao amin'ny ekipany
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy, dia mandeha amin'ny ekipa Under-11 amin'ny teny anglisy, Watford izy ankehitriny.
Ny vadin'i Kanu rehefa nandre ny vaovao tsara dia nalaina tao amin'ny Instagram mba hizara ny hafalian'izy ireo:
"Enfield mpandresy !!! Whoop Whoop. Arahabao ny ankizilahy tiako sy ny ekipany mba handresy ny baolina football Enfield ho an'ny sekolinao. Sean boy. Ny mpilalao ambony indrindra. Ny asa mafy ataonao, ny fanoloran-tena sy ny fangorahana dia tsy misaina. Ataoko toy ny mirehareha ny maha-mamanao anao. Mihinjakana bebe kokoa. Fitahiana maro. Mendrika anao izany, "
Nanoratra tao amin'ny Instagram ilay renim-pireharehana.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Ny Linda Ikeji
Inona no mitranga rehefa manambady rahalahy iray amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza any Nizeria ilay anabavy mpitoraka bilaogy lehibe indrindra any Nizeria?
Ny rahavavin'i Linda Ikeji, Laura Ikeji Kanu, dia nanambady an'i Ogbonna Kanu, tanora zandrin'i Kanu Nwankwo, tao amin'ny tanànan'i Nkwerre, any Imo, Nizeria.
Ny fanambadian'i Ogbonna Kanu tamin'i Laura Ikeji
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -toetra
Nwankwo Kanu dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny tanjaky ny Kanu: Izy no Creative, be fanetren-tena, malala-tanana, mafana fo, faly ary mahatsikaiky.
Ny Fahalemen'i Kanu: Mety ho kamo sy tsy misy dikany izy.
Inona no tian'i Kanu: Ny teatra, ny fialantsasatra, ny fiderana, ny lafo, ny loko mamirapiratra ary ny fialamboly amin'ny namana.
Inona no tsy tia an'i Kanu: Ny tsy fanarahan-dalāna, miatrika ny zava-misy sarotra, tsy ho toy ny mpanjaka.
Amin'ny tena izy, Kanu dia mpitarika voajanahary natsangana izay nahita ny kapitenin'ny ekipa Nizeriana Nasionaly nandritra ny taona 14. Misy foana ny "mpanjakan'ny fanjakan'ny ala" ao aminy. Izany no antony nisafidianany hanambady tovovavy iray izay 10 taona latsaka noho izy.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -fiara
Kanu dia mpifankatia fiara Ferrari. Ity ambany ity ny Legend sy ny zanany izay mametraka amin'ny iray amin'ny Ferraris azy.
Afaka mahazo ny zanany lahy i Kanu
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Heart Defect
Na izany aza, fotoana fohy taorian'ny niverenany avy tamin'ny Olympika, Kanu dia nandinika ny fitsaboana tao Inter, izay nampiseho fa tena matotra am-po tsiny.
Nodidiana nandidiana tamin'ny novambra 1996 izy mba hanoloana ny aortic valve ary tsy niverina tao amin'ny kliobany mandrapahatongan'ny volana 1997. Ao amin'ny tafatafa, matetika i Kanu dia mitanisa ny finoany amin'ny maha-kristiana azy ary matetika izy no nanamarika io fotoan-tsarotra io nandritra ny fotoana niasany ho fotoana nivavahany tamin'Andriamanitra.
Ny zava-niainan'i Kanu koa dia nitarika tamin'ny fananganana ny Kanu Heart Foundation, fikambanana iray izay manampy ireo tanora Afrikana malaza izay mijaly noho ny hadisoana ao amin'ny fo ary ny fampiroboroboana ny asa ho an'ny ankizy tsy manan-kialofana ao 2008.
Ny tantaran'ny Nwankwo Kanu Childhood Plus Untold -Records
Ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny baolina kitra any Afrika ankehitriny i Kanu.
Nahazo medaly mediona UEFA Champions League izy, medaly UEFA-Pokal, medaly telo mpandresy tamin'ny FA sy mpilalao afrikana roa tamin'ny taona hafa. Izy koa dia iray amin'ireo mpilalao vitsivitsy izay nahazo ny Premier League, ny FA, ​​ny Ligin'ny Champions, ny UEFA Cup ary ny medaly volamena Gold. Izy no nanao ny fiovan'ny toetr'andro fahatelo indrindra amin'ny tantaran'ny Premier League, miseho avy amin'ny fotoanan'ny banky 118.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Nwankwo Kanu momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.